လူသတ်မှု – Eleven Media Group
အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ဆရာဝန်အား ဓားဖြင့် ထိုးသတ်မှု၌ ယခင် စကားများ ရန်ဖြစ်ရာမှ ထောင်ကျခဲ့သည်ကို မကျေနပ်၍ သတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်
Posted on October 5, 2018 October 5, 2018 by သီဟအောင်
အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာ ယခင်စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ ထောင်ကျခဲ့မှုကို မကျေနပ်၍ ဆေးခန်းအတွင်းသို့ဝင်ကာ ဆရာဝန်အား ဓားဖြင့် ထိုးသတ်ခဲ့သည်ဟု ကျူးလွန်သူ ထွက်ဆိုခဲ့ ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်မှ သေဆုံးသူ ဒေါက်တာထွန်းလွင်နှင့် ၎င်းအား ဆေးခန်းအတွင်းသို့ဝင်ပြီး ဓားဖြင့် ထိုးသတ်ခဲ့သူ ဘိုဘို (ခ)လွင်ဘိုဘိုကျော် (၃၃ နှစ်) မှာ ယခင်က စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာထွန်းလွင်မှာ ဘိုဘို (ခ)လွင်ဘိုဘိုကျော် (၃၃နှစ်) အား အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သဖြင့် ဘိုဘို (ခ) လွင်ဘိုဘိုကျော် (၃၃ နှစ်) မှာ ထောင်တစ်လ ကျခဲ့ဖူးကြောင်း ကျူးလွန်သူ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ သိရသည်။
ဘိုဘို (ခ) လွင်ဘိုဘိုကျော်အား အောက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင် အင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ် ရမန်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်၊ ည ၆ နာရီခွဲခန့်တွင် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ သရက်ခြံလမ်းနေ ဒေါက်တာထွန်းလွင်သည် ၎င်း၏ ဆေးခန်းတွင် လူနာများအား ဆေးကုသနေစဉ် တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေ ဘိုဘို (ခ) လွင်ဘိုဘိုကျော်မှာ ဆေးခန်းအတွင်းသို့ ၀င်၍ ဒေါက်တာထွန်းလွင်အား ဓားဖြင့် ၀င်ထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဓားဖြင့်ထိုးသူ ဘိုဘို (ခ) လွင်ဘိုဘိုကျော်အား အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့ ည ၉ နာရီ ကျော်ခန့်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged လူသတ်မှုLeaveaComment on အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ဆရာဝန်အား ဓားဖြင့် ထိုးသတ်မှု၌ ယခင် စကားများ ရန်ဖြစ်ရာမှ ထောင်ကျခဲ့သည်ကို မကျေနပ်၍ သတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်မှ ဖမ်းဆီးထားသူ အမျိုးသမီးအား ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်ရမန်ယူ
Posted on October 4, 2018 October 5, 2018 by သီဟအောင်
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်မှ ဖမ်းဆီးထားသူ အမျိုးသမီးအား အောက်တိုဘာ ၄ ရက်က ရုံးထုတ်လာစဉ် (ဓာတ်ပုံ-သီဟအောင်)
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်မှ ဖမ်းဆီးထားသူ အမျိုးသမီးအား အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် ရုံးထုတ်ရမန်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးထားသူ မလင်းလင်းခိုင် (၃၉) နှစ်အား အောက်တိုဘာ ၄ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်တရားရုံး၌ ဒုတိယအကြိမ် ရမန်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းရုံးချိန်းသို့ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ မလင်းလင်းခိုင်၏ မိသားစုဝင် အချို့နှင့် ၎င်းအမှုအား လိုက်လံကူညီပေးနေသူများ လာရောက်ခဲ့သည်။
“ဒီနေ့က ဒုတိယအကြိမ် ရမန်ယူတာပါ။ ရုံးချိန်းကို လာမည့် ၁၇ ရက်ကို ပြန်ချိန်းဆိုထားပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့ကတော့ အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှာ စတင်တရားစွဲဆိုမှာပါ” ဟု ဖမ်းဆီးခံထားရသူ မလင်းလင်းခိုင်ဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ရှေ့နေတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် မလင်းလင်းခိုင် အမှုရင်ဆိုင်နေစဉ် လိုအပ်သည်များကို အသုံးပြုရန် ဘဏ်အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်ပေးထားပြီး အဆိုပါ အကောင့်အတွင်းမှ ငွေများအား အနုပညာရှင် ကိုနိုင်ဇော်က ဦးစီးကြီးကြပ်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ၎င်းဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ရှေ့နေက ဆိုသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ တောင်လုံးပြန်ရပ်ကွက်၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခုသို့ အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရောက်ရှိလာပြီး တည်းခိုခန်းလေးလွှာရှိ အခန်းတစ်ခန်းကို ငွေကျပ် ၆၀၀၀ ဖြင့် ငှားရမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် အမျိုးသမီးက အခန်းအတွင်းမှ ထွက်လာပြီး တည်းခိုခန်းကောင်တာရှိ မန်နေဂျာထံတွင် အခန်းခ
ကျပ် ၆၀၀၀ အားပေးချေကာ ထွက်သွားခဲ့ကြောင်း၊ တည်းခိုခန်းမန်နေဂျာက အခန်းအားရှင်းရန်အတွင်းသို့ကြည့်စဉ် အမျိုးသားမှာ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ရဲစခန်းသို့ အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်းနှင့် အခင်းဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်သည့် အသံအများ၊ အော်ဟစ်သည့်အသံများကြားရခြင်း မရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
အလောင်းအား စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ နောက်ကျောတွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ရင်ညွန့်တွင်ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာတစ်ချက် ရရှိကာ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ၎င်းနှင့်အတူလာပြီး ပြန်လည်ထွက်သွားသည့် ကျူးလွန်သူအမျိုးသမီးကို CCTV မှတ်တမ်းများမှာ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျုးလွန်သူ မလင်းလင်းခိုင်အား စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တရားရုံး၌ ပထမအကြိမ် ရမန်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးသူ အမျိုးသားအား မလင်းလင်းခိုင် သတ်ခဲ့ရခြင်းမှာ ၎င်းအားလူပျိုဟု လိမ်လည်ပြောဆို ပေါင်းသင်း၍ မြ၀တီမြို့တွင် တစ်ဦးတည်း စွန့်ပစ်ထားခဲ့မှုကြောင့် နာကြည်းစိတ်ဖြင့် တည်းခိုခန်းတွင်ချိန်းကာ ဓားဖြင့် ထိုးသတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
Posted in NewsTagged လူသတ်မှုLeaveaComment on မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်မှ ဖမ်းဆီးထားသူ အမျိုးသမီးအား ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်ရမန်ယူ
သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်မှု အပါအ၀င် စက်တင်ဘာလအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ လူသတ်မှု ၁၆ မှုဖြစ်ပွား
Posted on October 4, 2018 by သီဟအောင်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်တင်ဘာတွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်မှု အပါအ၀င် လူသတ်မှု ၁၆ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရသည်။
စက်တင်ဘာလအတွင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် လူလေးဦးက အမျိုးသားတစ်ဦးအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့၌ပင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် စက်တင်ဘာအတွင်း ထန်းတပင်မြို့နယ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူအား သားမှ သတ်မှု၊ ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် စတိုးဆိုင်မှအလုပ်သမားနှစ်ဦး စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှု၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်တွင် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစကားများရန်ဖြစ်ရာမှ ခင်ပွန်းအား ဇနီးဖြစ်သူက ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုးသတ်မှု စသည့် လူသတ်မှုအချို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာတွင် လုယက်မှုနှစ်မှု၊ မုဒိမ်းမှု ၂၁ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အမှုကြီးပေါင်း ၃၉ မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ပေါ်မှ ဇနီးမောင် နှံနှစ်ဦးအား လူတစ်စုမှ လူမြင်ကွင်း နံနက်ပိုင်းတွင် ဓား ဖြင့် ၀ိုင်းခုတ်မှု စက်တင်ဘာလအတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း၌ နာကျင်စေမှု ၁၇၆ မှု၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ခိုးမှု ခုနစ်မှု၊ ကားခိုးမှု လေးမှု၊ ခါးပိုက်နှိုက်မှုတစ်မှု၊ ခိုးမှု(ရိုးရိုး) ၉၆ မှုတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသ ကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ နှစ်နှစ်ပြည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရန် ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ရန်ကုန်မြို့အား ဒုစရိုက်ကင်းစင်ပြီး နေချင့်စဖွယ်မြို့တော်ကြီးဖြစ်အောင် တည် ဆောက်နေကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အဓိကမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သဖြင့် ပြည်ထဲ ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ခွဲတမ်းရရှိမှုတွင် အများဆုံး ရရှိထားသော် လည်း လုံလောက်မှုမရှိသေးကြောင်း အဆို ပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted in NewsTagged လူသတ်မှုLeaveaComment on သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်မှု အပါအ၀င် စက်တင်ဘာလအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ လူသတ်မှု ၁၆ မှုဖြစ်ပွား
Posted on September 22, 2018 September 23, 2018 by Eleven Media Group
ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် စတိုးဆိုင်မှ အလုပ်သမားနှစ်ဦး ငါးပိဝယ်မလာသည့်ကိစ္စ ဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် တောင် ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီခန့် တွင် ကော့မှူးမြို့နယ် ဇီးကုန်းကျေးရွာ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းရှိ စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် စနိုင်ကိုဇင် (၁၇ နှစ်) သည် ကော့မှူးအတွင်းဈေးဝယ်ပြီး ၎င်းအလုပ်လုပ်သည့် စတိုးဆိုင်သို့ ပြန်လာခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ဆိုင်သို့ရောက်သည့်အချိန်တွင် စနိုင်ကိုဇင် (၁၇ နှစ်) မှာ ငါးပိမ၀ယ်လာသဖြင့် ၎င်း နှင့်အတူ စတိုးဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်သည့် ကျော်ထက်အောင် (၁၈ နှစ်) က ပြောဆိုရာ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစကားများခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ စကားများရာမှ စနိုင်ကိုဇင် (၁၇ နှစ်) မှာ ဆိုင်တွင်ရှိသည့် ကတ်ကြေးဖြင့် ကျော်ထက်အောင် (၁၈ နှစ်) ၏ လည်ပင်း အားထိုးခဲ့ကြောင်း တောင်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ကတ်ကြေးဖြင့်ထိုးသည့်အချိန်တွင် ဆိုင်မှအခြားဝန်ထမ်းများက ၀င်ရောက်တားမြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းသို့ တားမြစ်သည့်အချိန်တွင် စနိုင်ကိုဇင် (၁၇ နှစ်) က ဆိုင်၌ ရောင်းချသည့် အရိုးအသွား ၇ လက်မခန့်ရှိ ကြက်သွန်လှီးဓားဖြင့် ကျော်ထက်အောင် (၁၈ နှစ်)၏ ၀မ်းဗိုက်အား ထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ကျော်ထက်အောင် (၁၈ နှစ်)မှာ ၎င်း၏ ၀မ်းဗိုက်မှ ဓားအား ဆွဲနှုတ်၍ ဓားကိုင်ရမ်းခဲ့ရာ စနိုင်ကိုဇင် (၁၇ နှစ်) မှာ ၀ဲလက်ဖ၀ါးပြတ်ရှဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ၀ဲကျောကုန်း ပြတ်ရှဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ၀ဲခါးစောင်းပြတ်ရှ ဒဏ်ရာတစ်ချက် ရရှိခဲ့ကာ ကော့မှူးဆေးရုံ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ကတ်ကြေးနှင့် လည်ပင်း၊ ဓားဖြင့် ၀မ်းဗိုက်အထိုးခံရသည့် ကျော်ထက်အောင် (၁၈ နှစ်) မှာ လည်ပင်းထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်နှင့် ၀မ်းဗိုက် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက် ရရှိကာ ကော့မှူးဆေးရုံ၌ သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း တောင်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
“ဆိုင်ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက် ငါးပိပါမလာတဲ့ကိစ္စက စပြီး စကားများရန်ဖြစ်ရာကနေ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားတာပါ။ ကျူးလွန်သူကိုလည်း ဖမ်းဆီးထားပြီး လူသတ်မှုနဲ့ အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ သေဆုံးသူက မန္တလေးဇာတိ ဖြစ်ပြီး ကျူးလွန်သူက ဧရာဝတီဇာတိပါ” ဟု တောင်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
Posted in NewsTagged လူသတ်မှုLeaveaComment on ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် စတိုးဆိုင်မှ အလုပ်သမားနှစ်ဦး ငါးပိ ၀ယ်မလာသည့်ကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
Posted on September 21, 2018 September 21, 2018 by မင်းသိန်းနိုင်၊ မျိုးထက်ပိုင်
အမှုမှ ဖမ်းဆီးရမိသူအမျိုးသမီးအား စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်က ရုံးထုတ်လာစဉ် (ဓာတ်ပုံ- မျိုးထက်ပိုင်)
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ တောင်လုံးပြန်ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်တောင်ဈေးအနီး တည်းခိုခန်းတစ်ခုအတွင်း လူသတ်မှု ကျူးလွန်သည့် အမျိုးသမီးကို ဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်ကြောင်း အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ တောင်လုံးပြန်ရပ်ကွက်၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခုသို့ အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရောက်ရှိလာပြီး တည်းခိုခန်းလေးလွှာရှိ အခန်းတစ်ခန်းကို ငွေကျပ် ၆၀၀၀ ဖြင့် ငှားရမ်းခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယင်းသို့ငှားရမ်းပြီးနောက် နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် အမျိုးသမီးက အခန်းအတွင်းမှ ထွက်လာပြီး တည်းခိုခန်းကောင်တာရှိ မန်နေဂျာထံတွင် အခန်းခ ၆၀၀၀ ကျပ်အား ပေးချေကာ ထွက်သွားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ထွက်သွားခဲ့ပြီးနောက် တည်းခိုခန်းမန်နေဂျာမှ အခန်းအား ရှင်းရန်အတွင်းသို့ကြည့်စဉ် အမျိုးသားမှာ သေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်းနှင့် အခင်းဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်သည့် အသံများ၊ အော်ဟစ်သည့်အသံများ ကြားရခြင်းမရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
အလောင်းအား ရဲတာဝန်ရှိသူများ စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ နောက်ကျောတွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်၊ ရင်ညွန့်တွင် ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာတစ်ချက် ရရှိကာ သေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ၎င်းနှင့်အတူ လာပြီး ပြန်လည်ထွက်သွားသည့် ကျူးလွန်သူအမျိုးသမီးကို CCTV မှတ်တမ်းများမှာတွေ့ရှိရကာ ၎င်းမှာ ဆံပင်ကို နှစ်ဖက်ကျစ်ထားပြီး အနီရောင်အင်္ကျီအကွက်ကို ၀တ်ဆင်ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ ယင်း အမျိုးသမီးအား မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့မရဲစခန်းက (ပ) ၄၉၀/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့်အမှုဖွင့်ကာ သေဆုံးသူ၏ကိုယ်ရေးအချက် အလက်နှင့် ကျူးလွန်သူအား ဖမ်း ဆီးရမိရေး စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ရဲတာဝန်ရှိသူများ စုံစမ်းဆောင်ရွက်ရာ သေဆုံးသူမှာ ခရမ်းမြို့နယ်နေ ထွန်းလင်း အောင်(ခ)ဖိုးထောင်(၃၂)နှစ်ဆိုသူဖြစ် ကြောင်းသိရပြီး ကျူးလွန်သည့် အမျိုးသမီးမှာလဲ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ မေ တ္တာလမ်းနေ လင်းလင်းခိုင်(၃၉)နှစ် ဆိုသူဖြစ်သည်ကို စုံစမ်းသိရှိခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
“သေဆုံးသူရဲ့နာမည်က ထွန်းလင်းအောင်ပါ၊ သူ့ရဲ့ နေရပ်လိပ်စာကတော့ ခရမ်းမြို့နယ်မှာ ပေါ့။ ပြီးတော့ သူက မြ၀တီမှာ အီကြာကွေးရောင်းပြီး နေဖူးတယ်လို့တယ်လို့သိရတယ်။ သူ့မှာ အိမ်ထောင်ရှိပြီး ကလေးသုံးယောက်ရှိတယ်လို့ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ သူ့ အမျိုးသမီးက လက်ရှိမှာ ခရမ်းမှာ ဘဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်”ဟု အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက “မလင်းလင်းခိုင်က အစက ထွန်းလင်းအောင်မှာ အိမ်ထောင်မရှိဘူး။ လူပျိုလူလွတ်လို့ ပြောတာကို ယုံတာပေါ့။ နောက်ပိုင်းကျမှ အိမ်ထောင်ရှိမှန်းသိတာလို့ စစ်ဆေးသိရှိရပါတယ်။ ကျူးလွန်ပြီးတော့ သူက ပထမတိမ်းရှောင်နေတာပေါ့။ သူ့ကို ဒီနေ့မနက် စောစောပိုင်းမှာဘဲ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ အောင်မေတ္တာလမ်းမှာရှိတဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်က ဖမ်းဆီးရမိပါတယ်။ သူက ဒီနေ့မှာ သူ့ အမေအိမ်ကိုလာတာလို့ သိရတယ်။ မြို့နယ်ရဲစခန်းက ဒီနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာဘဲ သူ့ကို တရားရုံးမှာ ချုပ်ရမန် ရယူပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေးနေပါ တယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
၎င်းအား စစ်ဆေးရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် Facebook အသုံးပြုရာမှ ထွန်း လင်းအောင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Messenger မှတဆင့် စကားပြောဆိုရာ မှ ထွန်းလင်းအောင်က အစ်မဖြစ်သူ ၏သားသုံးဦးကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေရသူဖြစ်ပြီး လူပျိုလူလွတ် ဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုသည်ကို ယုံကြည်ခဲ့ပြီး ၎င်းနှင့် သမီးရည်းစား ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် အပြင်တွင် တွေ့ဆုံ၍ အတူနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၇ ရက်တွင် ထွန်းလင်းအောင်က မြ၀တီသို့အလုပ်လုပ်ရန်ခေါ်ဆောင်သဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ကာ ထွန်းလင်းအောင်က မြ၀တီမြို့ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် အမည်မသိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် စကားပြောဆို၍ ကွမ်းဝယ်မည်ဟုဆိုကာ မလင်းလင်းခိုင်အား ထား၍ ထွက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ထွက်သွားခဲ့ပြီး နောက် ထွန်းလင်းအောင်မှာ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိတော့ဘဲ အမည်မသိအမျိုးသမီးက ထိုင်းနိုင်ငံသို့ပို့မည်ပြောစဉ် ကြောက်လန့်ကာ ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်သို့ ပြန် လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးသိရှိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ထွန်းလင်းအောင်ကို နာကျည်းစိတ်ဖြစ်၍ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ထီပေါက်သည်ဟုဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုပြီး ချိန်းဆို၍ ပုဇွန်တောင်ဈေးရှိ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းနောက် မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ တောင်လုံးပြန်ရပ်ကွက်ရှိ တည်းခိုခန်းသို့သွား၍ အတူနေထိုင်ခဲ့ပြီး ထွန်းလင်းအောင်အတွက် ရွှေဆွဲကြိုးအတုတစ်ကုံးအား ဆွဲပေးခဲ့ပြီးနောက် ထွန်းလင်းအောင်က လှဲအိပ်နေစဉ် မလင်းလင်းခိုင်က အသင့်ပါလာသည့်ဓားဖြင့်နှစ်ချက်ထိုး၍ တည်းခိုခန်းမှ ထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲတာဝန်ရှိသူများ စစ်ဆေးချက်အရ သိရသည်။
Posted in NewsTagged လူသတ်မှုLeaveaComment on မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တည်းခိုခန်းအတွင်း လူသတ်မှု ကျူးလွန်သူအား ဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်ပြီး လူပျိုဟု လိမ်လည်ပြောဆိုပေါင်းသင်း၍ မြ၀တီမြို့တွင် စွန့်ထားခဲ့မှုကြောင့် နာကြည်းစိတ်ဖြင့် ဓားဖြင့် ထိုးသတ်ခဲ့ဟု ထွက်ဆို
Posted on September 16, 2018 September 17, 2018 by မင်းသိန်းနိုင်​
(ကျူးလွန်သူဟု ယူဆရသူအား CCTV တွင် တွေ့ရစဉ် ) (သေဆုံးသူ၏ အလောင်းအား သယ်ဆောင်နေစဉ်)
မင်္ဂလာ​တောင်​ညွန့်​မြို့နယ်​၊ အထက်​ပုဇွန်​​တောင်​လမ်းရှိ ပုဇွန်​​တောင်​​ဈေးအနီး တည်းခိုခန်းတစ်​ခု၏ ​လေးလွှာတွင်​ လူသတ်​မှုဖြစ်​ပွားခဲ့​ကြောင်း စက်​တင်​ဘာ ၁၆ ရက်​တွင်​ စုံစမ်းသိရှိရသည်​။
ဖြစ်​စဉ်​မှာ စက်​တင်​ဘာ ၁၆ ရက်​ နံနက်​ ၉ နာရီခန့်​တွင်​ မင်္ဂလာတောင်​ညွန့်​မြို့နယ်​၊ ​တောင်​လုံးပြန်​ရပ်​ကွက်​၊ အထက်​ပုဇွန်​​တောင်​လမ်းရှိ တည်းခိုခန်းတစ်​ခုသို့ အမျိုးသားတစ်​ဦးနှင့်​ အမျိုးသမီးတစ်​ဦး​ရောက်​ရှိလာပြီး တည်းခိုခန်း​လေးလွှာရှိ အခန်းတစ်​ခန်းကို One Section ၆၀၀၀ ကျပ်​ဖြင့်​ ငှားရမ်းခဲ့​ကြောင်း မြို့နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယင်းသို့ ငှားရမ်းပြီး နံနက်​ ၁၀ နာရီခန့်တွင်​ အမျိုးသမီးက အခန်းအတွင်းမှ ထွက်လာပြီး ​ကောင်​တာတွင်​ အခန်းဖိုး ကျပ်​ ၆၀၀၀ အား​ ပေး​ချေကာ ပြန်​ထွက်​သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်​။
“ဒီနှစ်​​ယောက်​က တည်းခိုခန်းကို မနက်​ပိုင်းမှာ​ရောက်​လာပြီး အခန်းငှားတယ်​။ ပြီး​တော့ ဘယ်​​လောက်​မှ မကြာဘူးလို့ သိရတယ်။ ​ ကောင်​မ​လေးက ထွက်​လာတယ်​။ ပိုက်​ဆံရှင်းတယ်​။ တည်းခိုခန်းပိုင်​ရှင်​ သတိထားမိတာက ကောင်​မ​လေးက အအလိုပဲ။ စကားမ​ပြော တတ်​တဲ့ပုံစံလို့ သိရတယ်​။ အခန်းတွင်းထဲက ရုန်းရင်းဆန်​ခတ်​ဖြစ်​တာတို့၊ ​အော်​ဟစ်​တာ​သံ​တွေမကြားဘူးလို့ သိရတယ်​။ ​​သေ​နေတဲ့ အ​လောင်းကို​တော့ တည်းခိုခန်းပိုင်​ရှင်​က စ​တွေ့တာပါ။ သူ​တွေ့​တော့ ရဲစခန်းကို အ​ကြောင်းကြားပါတယ်​။ ကျူးလွန်​တဲ့ မိန်းကလေးကို​တော့ ဖမ်းဆီးဖို့ လိုက်​လံစုံစမ်း​နေပါပြီ။ အမြန်ဆုံးဖမ်းမိအောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ” ဟု မင်္ဂလာ​တောင်​ညွန့်​မြို့နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်​ဦးက​ ဆိုသည်​။
အ​လောင်းအား ရဲတာဝန်​ရှိသူများက စစ်​​ဆေးရာ ​သေဆုံးသူမှာ အသက်​ ၃၀ ၀န်းကျင်​ အမျိုးသားတစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး ​နောက်​​ကျောတွင်​ ထိုးသွင်းဒဏ်​ရာတစ်​ချက်​၊ ရင်​ညွန့်​တွင်​ ထိုးသွင်းဒဏ်​ရာတစ်​ချက်​ရရှိကာ ​သေဆုံးနေခြင်းဖြစ်​ကြောင်း​တွေ့ရပြီး ​ကျူးလွန်​သည့်​ အမျိုးသမီးမှာ အသက်​ ၂၅ နှစ်​အရွယ်​ခန့်​ရှိကာ ဆံပင်​နှစ်​ဖက်​ကျစ်​ထားကြောင်း၊ အင်္ကျီအနီကွက်​၀တ်​ဆင်​ထားသည်​က CCTV မှတ်​တမ်းမှ ​တွေ့ရှိရ​ကြောင်း သိရသည်​။
“ဒဏ်​ရာက​တော့နှစ်​ချက်​​ပေါ့။ ရင်​ညွန့်၊ ​ကျောကုန်းမှာ​ပေါ့။ ကနဦးစစ်​​ဆေးချက်​အရ​တော့ ကာမစပ်​ယှက်​ထားတဲ့ ပုံစံမ​တွေ့ရဘူး။ ဒါ​ပေမဲ့ အဲဒါကို မှုခင်းဆရာဝန်​က ဆက်​လက်​စစ်​​ဆေးပါလိမ့်​မယ်​။ ​သေဆုံးသူမှာက ​ရွှေဆွဲကြိုးတစ်​ပင်​ ဆွဲထားတာ​တွေ့တယ်​။ ပန်းထိမ်​ဆရာနဲ့​ ခေါ်စစ်​တယ်​။ ​ရွှေမဟုတ်ဘူး ဆွဲကြိုးက အတုပါ။ သူကိုင်​တဲ့ လက်​ကိုင်​ဖုန်း​တော့ မ​တွေ့ဘူး။ ​ပျောက်​​နေတာ​ပေါ့။ ကျူးလွန်​တဲ့ အရာ ဥပမာ ဓား၊ သံချွန်​တစ်​ခုခုပေါ့။ အဲဒါ​တွေလည်း အခန်းထဲမှာ မ​တွေ့ရပါဘူး။ ကျူးလွန်​ပြီး ပြန်​ယူသွားတာ​ပေါ့” ဟု ရဲအရာရှိက ဆက်လက်​ပြောကြားသည်​။
​ထို့ပြင်​ ​သေဆုံးသူအမျိုးသားမှာ အခင်းဖြစ်​ရပ်​ကွက်တွင်​​ နေထိုင်​သူမဟုတ်​​ဘဲ မည်သူမည်​၀ါဖြစ်​သည်​ကို မသိရှိ​သေး​ကြောင်း ​သေဆုံးသူက ​မှောက်​လျက်​အ​နေအထားဖြင့်​​ သေဆုံး​နေ​သည်​ကို​ တွေ့ရ​ကြောင်း၊ ကျူးလွန်သူ အမျိုးသမီးကို ရဲတပ်​ဖွဲ့က လိုက်​လံဖမ်းဆီးနေ​ကြောင်း ​တောင်​လုံးပြန်​ရပ်​ကွက်​အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးမျိုးသန့်က​ ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်​စဉ်​မှ ကျူးလွန်​သူဟု ယူဆရသူ အမျိုးသမီးအား မင်္ဂလာ​တောင်​ညွန့်​ မြို့မရဲစခန်းက ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်​မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်​ကာ ဖမ်းဆီးရမိ​ရေး​ ဆောင်​ရွက်​​နေ​ကြောင်း သိရသည်​။
Posted in NewsTagged မင်္ဂလာ​တောင်​ညွန့်​မြို့နယ်, လူသတ်မှုLeaveaComment on မင်္ဂလာ​တောင်​ညွန့်​မြို့နယ်​ အထက်​ပုဇွန်​​တောင်​လမ်းရှိ တည်းခိုခန်း​တစ်​ခုအတွင်း ​အခန်းတစ်​ခန်း၌ လူသတ်​မှုဖြစ်​ပွား
Posted on September 12, 2018 September 12, 2018 by Eleven Media Group
ဓာတ်ပုံ – Yangon Police
တာမွေမြို့နယ်၊ တာမွေဈေးရှေ့တွင် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်က အုပ်စုနှစ်စု ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာမှ ဓားခုတ်ခံရမှုကြောင့် တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည့် ဖြစ်စဉ်မှ လူသတ်မှု ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး ရမိပြီဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် ညနေ ၅ နာရီအချိန်က တာမွေမြို့နယ်၊ (က) ရပ်ကွက်နေ ဒေါ်———၏ အတူနေ သမီးဖြစ်သူ မ——- နှင့် သမီး၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကတုံးမ(ခ) ဇော်ဟိန်းသူ၊ (၃၀)နှစ်တို့သည် ကျိုက္ကဆံလမ်းမပေါ်ရှိ ——- ကလေးကစားသည့်ဆိုင်တွင် ဂိမ်းဆော့ရင်း ဆိုင်ရှေ့တွင် ၎င်း၏ကလေးအား အနီးရှိ ကလေးတစ်ဦးမှ ကစားစရာ သေနတ်ဖြင့် ဦးခေါင်းအား ထုနေသောကြောင့် မထုရန် ပြောဆိုရာမှ အဆိုပါကလေး၏ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ည ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ် အချိန်ခန့်တွင် ၀င်းထွဋ်ဝင်း ဆိုသူမှ ဒေါ်——- ၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦး——–အား ဖုန်းဆက်၍ “မင်းတို့ေ-ာက်ချိုးမပြေဘူး။ မင်းတို့ကို လာခုတ်မယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး ဖုန်းထဲတွင် အပြန်အလှန် စကားများခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် ဒေါ်—-တို့မိသားစုများမှာ တိုက်အောက်သို့ ဆင်းလာစဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင် လမ်းတစ်ဖက်တွင် ကား (၃) စီးမောင်းနှင်လာပြီး ရပ်တန့်၍ ကားပေါ်မှ လူတစ်စု ဆင်းလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ၎င်းတို့လက်ထဲတွင် လှံ၊ ဓားများကိုင်ဆောင်ကာ ပြေးဝင်ထိုးခုတ်မှုကြောင့် ဒေါ်———၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦး——မှာ ယာလက်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့အိမ်မှ အလုပ်သမားဖြစ်သူ ကို—- တွင် ၀ဲပခုံးထိုးသွင်းဒဏ်ရာ၊ ၀ဲမျက်ရိုး ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ၊ ဦးခေါင်းနောက်စေ့ ပြတ်ရှဒဏ်ရာများဖြင့် လည်းကောင်း၊ သမက်ဖြစ်သူ ကတုံးမ(ခ) ဇော်ဟိန်းသူမှာ ဦးခေါင်းနောက်စေ့ ပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ ၀ဲမျက်ခုံး ဖူးရောင်ဒဏ်ရာ၊ ၀ဲမျက်လုံးပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ ရင်ညွန့်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ၊ ၀ဲနံဘေး ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ၊ ကျောကုန်းဝဲဘက် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ၊ ယာပေါင်ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာများဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်စဉ် သမက်ဖြစ်သူ ကတုံးမ(ခ) ဇော်ဟိန်းသူမှာ လမ်း၌သေဆုံးသွားပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် အလုပ်သမား ဖြစ်သူတို့မှာ ဆေးရုံတွင် ကုသလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကြောင့် နာကျင်ဒဏ်ရာများ ရရှိအောင် ပြုလုပ်သူနှင့် သမက်ဖြစ်သူအား သေဆုံးအောင် ပြုလုပ်သူတို့အား အရေးယူပေးရန် တိုင်ကြားသဖြင့် တာမွေမြို့မရဲစခန်း (ပ)၈၈၃/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂/၃၂၆/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ပြီး တရားခံဖမ်းဆီး ရမိရေးအတွက် စုံစမ်းခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ အနီးကပ် ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ မှုခင်းနှိမ်နင်းရေးဌာနစုမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ အခင်းဖြစ်နေရာသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ အခင်းဖြစ်နေရာရှိ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ ကျန်ရှိခဲ့သော DD/——– Toyota Succeed အပြာရောင် အငှားယာဉ်ပေါ်မှ ဓားရှည်(၉)ချောင်း၊ ဓားတို(၂)ချောင်း၊ လှံ (၂)ချောင်း၊ ပေါက်စိန် (၁)လက်၊ သံလက်သီး ကွင်း(၁)ခုနှင့် တာမွေယာယီဈေးရှေ့ အမှိုက်ပုံအနီးမှ ဓားရှည် ၂ ချောင်း၊ တာမွေယာယီဈေးနောက် လူဝင်ပေါက်အနီးမှ ဓားရှည်(၂) ချောင်းတို့အား အသီးသီးတွေ့ရှိ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍ ည ၁၁ နာရီ ၂၅ မိနစ်အချိန်တွင် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ (၂၆)ရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း မပေါ်တွင် AA/——– Toyota Caldina အငှားယာဉ်ပေါ်မှ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၂၂) ရပ်ကွက်နေ ဖြူတုတ်(ခ)သိန်းထွေး၊ (၄၀)နှစ်အား ရန်ဖြစ်စဉ်တွင် ရရှိသော ၀ဲလက်ဖ၀ါး ပြတ်ရှဒဏ်ရာဖြင့် လည်းကောင်း၊ သာကေတမြို့နယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်နေ သံဗုဒ္ဓေ(ခ)၀င်းနိုင်၊ (၄၁)နှစ်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ (၂၂)ရပ်ကွက်နေ သီဟအောင်၊(၃၅)နှစ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်နေ ယဉ်မိုး(ခ)မိုးကြီး၊(၄၁)နှစ်တို့အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးနောက် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၇၇)ရပ်ကွက်နေ ၀င်းမြင့်၊ (၄၂)နှစ်မှာ 7J/——– Toyota Alphard အဖြူရောင်ယာဉ်နှင့် ထွက်ပြေးသောကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ ည ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်တွင် သာကေတမြို့နယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ န၀ရတ်လမ်းပေါ်တွင် ကားရပ်၍ ကားပေါ်မှ ဆင်းလာပြီး ပြန်လည်ခုခံသဖြင့် ပန့်အက်ရှင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၎င်း၏ ကျောကုန်းနှင့် လက်မောင်းနှစ်ဖက်တွင် ဒဏ်ရာများရရှိပြီး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့ နံနက် ၀၀၅၀ နာရီအချိန်တွင် သာကေတမြို့နယ်၊ ၁၀/မြောက်ရပ်ကွက်နေ သိန်းထိုက်အောင်(ခ) အန်းကုန်း၊ (၂၉)နှစ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ (၁၆၈)ရပ်ကွက်နေ မင်းအောင်၊ (၄၂) နှစ်တို့အား ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၅၆)ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာလမ်းပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ယင်းနေ့ နံနက် ၀၂၀၅ နာရီအချိန် သာကေတမြို့နယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်နေ ၀င်းထွဋ်ဝင်း၊ (၄၂)နှစ်အား ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်၊ (၆၇)ရပ်ကွက်၊ ရထားသံလမ်းအနီး၊ ဗေလုဝကွေ့တွင် လည်းကောင်း အသီးသီး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူများဖြစ်သည့် ၀င်းထွဋ်ဝင်းပါ (၈) ဦးတို့အား ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် သက်သေခံ ပစ္စည်းများနှင့် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
Posted in Crime, HeadlineTagged ရန်ကုန်, လူသတ်မှုLeaveaComment on တာမွေဈေးရှေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ်မှုမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရမိ
အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လယ်ကွင်းစပ်၌ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ အလောင်းအား စစ်ဆေးတူးဖော်နေစဉ်
ဟင်္သာတ တက္ကသိုလ်အနီး ချစ်သူလမ်းကြား၌ လူသတ် အလောင်းဖျောက်မှု နှစ်နှစ်ခွဲနီးပါး ကြာသည်အထိ ဟင်္သာတခရိုင် တရားရုံး၌ စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီး အမိန့်ချမှတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ် ၃၁ ရက်ကတည်းက ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၀၂/၂၀၁ ဖြင့် ရဲက တရားစွဲဆို တင်ပို့ထားခြင်းဖြစ်ပြီး တရားလို အပါအ၀င် သက်သေ ၄၅ ဦးကို စစ်ဆေးမှုအပြီး တစ်နှစ်နီးပါးအကြာတွင် တရားရုံးက စွဲချက် တင်ထားကြောင်း သိရသည်။
“တရားလိုနဲ့ လိုပြ သက်သေတွေရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရ ၁၄.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့မှာ (၁) တရားခံ သန်းဇော်ရော (၂) တရားခံ မနှင်းပွင့်ဖြူ (ခ) နှင်းချယ်ရီ အပေါ်မှာ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၀၂ (၁) (ခ)/ ၃၄ နဲ့ စွဲချက် တင်ခဲ့တယ်။ စွဲချက် တင်တဲ့အပေါ်မှာ တရားခံတွေက အပြစ်မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုတယ်။ ကိုယ်တိုင် သက်သေအဖြစ် အစစ်ခံမယ်။ ခံပြ သက်သေတွေ တင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ သူတို့ရှေ့နေတွေက တင်ပြလာတယ်။ တင်ပြလာတဲ့အပေါ် ဆက်လက်ပြီးတော့ တရားခံ စစ်ဆေးဖို့ အဆင့်မှာပဲ (၁) တရားခံရော၊ (၂) တရားခံရောက ကျွန်မတို့ခရိုင်တရားရုံးက စွဲချက်တင်တဲ့ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂(၁)(ခ)/၃၄ အပေါ်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်ကို စွဲချက်တင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ဆင်မှု တက်ရောက်သွားတယ်။ ပြင်ဆင်မှု တက်ရောက်သွားတော့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂(၁)(ခ)/၃၄ နဲ့ပဲ ဆက်လက်ပြီးတော့ အတည်ပြုခဲ့တယ်”ဟု ဟင်္သာတခရိုင် တရားရုံးမှ ဒုတိယ ခရိုင်တရားသူကြီး ဒေါ်တင်ကြူကြူဝင်းက ပြောကြားသည်။
စွဲချက်တင်အမိန့်ကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက် ဟင်္သာတခရိုင် တရားရုံးက (၁) တရားခံကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီး (၂) တရားခံကို စစ်ဆေးမည့်အဆင့်တွင် ရှေ့နေက ၄င်းအမှုသည်၏ ထုချေနိုင်စွမ်း ရှိ၊ မရှိ စိတ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုမှု ရှိလာသဖြင့် ဟင်္သာတဆေးရုံကြီးရှိ စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် စစ်ဆေးစေရာ ရန်ကုန်စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံ ကြီး၌ ပြသသင့်သည်ဟု ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ကြောင်း ဒုတိယခရိုင် တရားသူကြီးထံ မှ သိရသည်။
“အဲဒီ့ ဆေးစာအရ သူ့ကို ရန်ကုန် စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံကြီးမှာ စိတ်ပေါသွပ်ခြင်းကြောင့် ထုချေနိုင်စွမ်း ရှိ၊ မရှိ လျှောက်ထားတဲ့အပေါ် ခွင့်မပြုတဲ့အမိန့် ချခဲ့ပါတယ်။ (၁) တရားခံလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် ဒီအမှုက ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ကတည်းက စွဲတင်လာတဲ့ အမှုဖြစ်တာကြောင့် တရားခံ မနှင်းပွင့်ဖြူ အနေနဲ့ အမှုစတင် ဖြစ်ပွားစဉ်တုန်းက စိတ်ရောဂါဝေဒနာ ရှိတယ်လို့ မတင်ပြခဲ့ဘူး။ မြို့နယ် တရားရုံးမှာလည်း ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြောင့်ချက်ပေးခဲ့တယ်။ ဖြောင့်ချက်ပေးစဉ် အခါကလည်း ဝေဒနာ ခံစားနေရတယ်လို့ မပေါ်ပေါက်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်မက သူ့ကို ဆက်စစ်သွားမယ် ဆိုပြီးတော့ အမိန့်ချခဲ့တယ်။ ဒီအမိန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မနှင်းပွင့်ဖြူ (ခ) နှင်းချယ်ရီရဲ့ ရှေ့နေက အမိန့်အပေါ်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်ကို ရာဇ၀တ်ပြင်ဆင်မှု ထပ်တက်တယ်။ တက်သွားတဲ့အခါ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်က တရားခံ မနှင်းပွင့်ဖြူ (ခ) နှင်းချယ်ရီကို စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံကိုပြသဖို့ ဟင်္သာတဆေးရုံက စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ထင်မြင်ချက်အရရော၊ ဆေးစာအရရော တရားခံကို ဥပဒေပါ အခွင့်အရေး ပေးသင့်တယ်လို့ သုံးသပ်ပြီး ရန်ကုန် စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံကြီးကို ပို့ဆောင်ပြီးတော့ သက်သေထွက်ဆိုချက် ပေးနိုင်၊ မပေးနိုင် စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း အမိန့်ချတဲ့အတွက်ကြောင့် ကုသဖို့အတွက် စေလွှတ်ထားတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒုတိယခရိုင် တရားသူကြီး ဒေါ်တင်ကြူကြူဝင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ လူသတ် အလောင်းဖျောက်မှုမှ လူသေအလောင်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီခွဲခန့်က ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်အနီး ချစ်သူလမ်းကြားနံဘေး လယ်ကွင်းစပ်၌ လယ်ပိုင်ရှင်က မသင်္ကာဖွယ်ရာ အနေအထားတွေ့ရှိခဲ့ရာမှ တာဝန်ရှိသူများထံ အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးနောက် တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted in CrimeTagged ချစ်သူလမ်းကြား, လူသတ်မှု, ဟင်္သာတLeaveaComment on ဟင်္သာ တတက္ကသိုလ်အနီးတွင် လူသတ် အလောင်းဖျောက်မှု နှစ်နှစ်ခွဲနီးပါး ကြာသည်အထိ အမိန့်ချမှတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေး
လူသတ်မှုကျုးလွန်သူ အမျိုးသားမှာ ကို…. (၂၄ နှစ်) ဖြစ်ပြီး ၎င်းအား သြဂုတ် ၂၈ ရက် နံနက် ၇ နာရီခွဲခန့်တွင် မွန်ပြည်နယ် မုတ္တမမြို့ ဆီဆုံရပ်၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
“ကျုးလွန်သူကို သြဂုတ် ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းမှာ မွန်ပြည်နယ် မုတ္တမမှာ ဖမ်းဆီးရမိတာပါ။ ဖမ်းဆီးရမိသူကို ဒီကတပ်ဖွဲ့တွေက လွှဲပြောင်းယူဖို့ သွားနေပါတယ်” ဟု အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
လူသတ်မှု ကျူးလွန်သူမှာ သေဆုံးသူ ဒေါ်…. (၆၃ နှစ်) အား သားမယားပြုကျင့်ပြီး လည်ပင်းညှစ်သတ်ခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူ ဖြစ်သည်ဟု ကနဦး စစ်ဆေးချက်များအရ သိရှိရကြောင်း မုတ္တမနယ်မြေရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
“သြဂုတ် ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက မုတ္တမ ဆီဆုံရပ်မှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူဟာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူ ဖြစ်ကြောင်းကို မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့မရဲစခန်းမှူးနဲ့ ဆက်သွယ်အတည်ပြုချက် ရယူပြီးပါပြီ။ အခုရန်ကုန်ကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ ဆောင်ရွက် နေကြပါတယ်” ဟု မုတ္တမနယ်မြေရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
သြဂုတ် ၂၂ ရက် ည ၁၀ နာရီခန့်တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ခရမ်း-သုံးခွ မော်တော်ယာဉ်ဂိတ် အနီးရှိ လေထိုးကျွတ်ဖာဆိုင်တွင် သေဆုံးနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အလောင်းတွေ့ရှိကြောင်း သတင်းရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ ဒေါ်…. (၆၃ နှစ်) ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးသူမှာ အဆိုပါဆိုင်၏ နောက်ဖေးအခန်း၌ သေဆုံးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ သေဆုံးသူမှာ နဖူး၊ နှာတံ ပိန်ချိုင့်စုတ်ပြဲနှင့် ယာလက်ဖျံ စုတ်ပြဲဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နေရာမှာ နေ့ခင်းအချိန်၌ လူအသွားအလာ များပြားသော်လည်း ညဘက်အချိန်တွင် မှောင်ပြီး လူပြတ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်အား မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့မရဲစခန်းမှ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ကျုးလွန်သူအား ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged လူသတ်မှု, အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်LeaveaComment on မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် အသက် ၆၀ ကျော် အဘွားအို တစ်ဦးအား သားမယားပြုကျင့်ပြီး သတ်ခဲ့သည့် အမျိုးသားအား မွန်ပြည်နယ် မုတ္တမမြို့တွင် ဖမ်းဆီးရမိ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာ ငြိမ်းချမ်းသာယာ ရပ်ကွက်တွင် အသက် (၁၆ နှစ်) အရွယ်ရှိ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျောင်းသူတစ်ဦး သြဂုတ် ၂၅ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီဝန်းကျင်တွင် အသတ်ခံရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အသတ်ခံရသူမှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုရန်အတွက် ဘော်ဒါဆောင်တွင် နေထိုင်သူ မသဲနုအောင်ဖြစ်ပြီး သြဂုတ် ၂၄ ရက်က နေမကောင်းသဖြင့် မိဘနေအိမ်သို့ ခွင့်ယူပြန်လာနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သြဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် မိခင်ဖြစ်သူက မောင်ဝမ်းကွဲ၏ ဇနီးဖြစ်သူကို ဆေးခန်းသွားပြစဉ် နေအိမ်ကို သော့ခတ်ကာ သမီးတစ်ဦးတည်း နေအိမ်တွင် ချန်ထားခဲ့ကြောင်း၊ နေအိမ်သို့ ပြန်လာစဉ် သမီးဖြစ်သူမှာ အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်ရှေ့တွင် ၀ဲနားထင် တစ်လက်မခန့် ပေါက်ပြဲတစ်ချက်၊ ၀ဲလက်မောင်းတွင် လက်မ၀က်ခန့် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာနှစ်ချက်၊ ဦးခေါင်းနောက်စေ့တွင် လေးလက်မခန့်တစ်ချက်၊ တစ်လက်မခန့်တစ်ချက်၊ နှာတံပေါ်တွင် တစ်လက်မခန့် တစ်ချက်၊ ၀ဲလည်ပင်း နှစ်လက်မခန့် တစ်ချက် ပက်လက်အနေအထားဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း သိရသည်။
နေအိမ်မှာ ဖားကန့်လုံးခင်း မြို့ရှောင်လမ်း အေးချမ်းသာယာရပ်ကွက် အစွန်အိမ်ဖြစ်ပြီး ဘေးအိမ်များနှင့် အနည်းငယ် ကွာဝေးသည့် အနေအထားတွင် ရှိနေကြောင်း၊ သံသယရှိသူကို မဖော်ထုတ်နိုင်သေးကြောင်း သိရသည်။
ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးအောင်စိုးမိုးက “ကျွန်တော့်သားသမီး သုံးဦးအနက် သမီးအကြီးဆုံးပေါ့။ ၁၀ တန်းတက်နေတယ်။ ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ မနေ့က ပြန်ခေါ်လာတာပါ။ ဒဏ်ရာက ပါးစပ်ကို တစ်ချက်ရိုက်တယ်။ နောက်စေ့မှာ ဓားနဲ့ထိုးသွင်းရာ သုံးချက်။ နားမှာ တစ်ချက်၊ လက်မောင်းမှာ ဓားရာတစ်ချက်ပါ။ အခု သမီးက ရင်ခွဲရုံထဲမှာပါ။ အရှေ့တံခါးက ပိတ်ထားတော့ နောက်ပေါက်ကနေ ၀င်လာတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဈေးဝယ်သွားတာက ၁၂ နာရီ ၊ အိမ်ပြန်ရောက် တာက ၃ နာရီဆိုတော့ အဲဒီကြားမှာဖြစ်တာ။ ကျွန်တော်က ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပေါ့။ အလောင်း တွေ့တာက ၃ နာရီကျွန်တော်တို့ ပြန်ရောက်တာက ၃ နာရီခွဲမှ။ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေက မလုံခြုံတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်သမီးက အိမ်မှာ ဖြစ်တာလေ။ လမ်းမှာနေရင်းဖြစ်တာမဟုတ် ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ဇာတိဖြစ်တဲ့ မိုးကောင်းကို ပြန်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေကို လုံခြုံမှု ပေးလည်း မပေးနိုင်ဘူး။ ပေးလည်း မပေးကြဘူး။ ရှေ့ဆက်ပြီး ရပ်တည်လို့ မရတော့ဘူး။ ဘယ်က လူတွေ၊ ဘယ်သူတွေ လာကြမှန်းမသိဘူး။ ကျွန်တော့်သမီးကို ကိုယ့်အိုး၊ ကိုယ့်အိမ်မှာ အခန်းထဲမှာ ထားခဲ့တာ။ လုံလုံခြုံခြုံ ထားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်သူနဲ့မှ ရန်ငြိုးရှိတာ၊ ရန်ဖြစ်တာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်က ကုမ္ပဏီမှာ ကားမောင်းတာ။ ညနေစောင်းမှ မိသားစုက အိမ်ပြန်ရောက်တာ။ ပစ္စည်းကတော့ မပျောက်ဘူး” ဟု ပြောကြားသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ လုံးခင်းနယ်မြေရဲစခန်းတွင် (ပ) ၁၂/၂၀၁၈ အမှုကြီး အမှတ်စဉ် ၁၄/၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။ တရားခံကို စုံစမ်းလျက်ရှိပြီး ဒေသခံများ သုံးသပ်ချက်အရ သူခိုးခိုးရန် ၀င်ရောက်စဉ် အိမ်ရှင်ဖြစ်သူကို တွေ့သဖြင့် အသင့်ဆောင်လာသည့် ဓားဖြင့် ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒေသခံများက သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသည်။
ဖားကန့်ဒေသသည် ကချင်ပြည်နယ်၏ အကြီးမားဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါး ဈေးကွက်အဖြစ် တည်ရှိနေပြီး ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား သိန်းနှင့်ချီ နေထိုင်သည့် ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှုခင်းကြီးများလည်း မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေရကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ဆိုသည်။
Posted in CrimeTagged ဖားကန့်, လူသတ်မှုLeaveaComment on ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျောင်းသူတစ်ဦး အသတ်ခံရ